Iza amin'ireo fitaovana fijerena ny fijerena indray ny navigateur dia afaka manampy ahy hanamboatra ny raki-tsarin'ny rohy web?
Eny, fantatry ny ankamaroan'ny mpanjifan'olotsotra ny zava-tsarobidy izay mampivelatra traikefa kokoa amin'ny alalan'ny tranonkala na tranokala na tranokala. Ho an'ny rohy anaty, izay manana ny rafitra arovany tsara dia hanampy ireo mpitsidika tena hikaroka lalindalina kokoa amin'ny sehatry ny votoaty rehetra. Tsy voatery milaza fa ny mpitsidika no mandoa ny fitsidihana lava, ny hetsika betsaka dia raisina an-tapitrisany, ary ny fanomezan-dàlana bebe kokoa dia homena an'ireo fitaovam-pikarohana lehibe (toa an'i Google, sy Yahoo ary Bing). Raha ny marina, ny rindran-damina dia anisan'ireo mpiady ambony indrindra manapaka ny sehatra maoderin'ny SEO. Noho izany, ny mombamomba ny rohinao ao amin'ny tranonkala dia mendrika hikaroka farafaharatsiny amin'ny fampiasana fitaovam-pijerena mpizara back-up roa, sa tsy izany?
Fidio ny fanorenana fifandraisana amin'ny rafitra tanteraka
Fa ahoana no ahafahana manao ny laharana ambony indrindra amin'ny SERP Google? Ahoana ny fomba hampiasana ny rindran-damba tena tsara? Inona no hataonao rehefa misy zavatra tsy mandeha? Ary iza no sazy tena mety indrindra, sa tsy izany? Ary nahoana ianao no tokony handefa izany fikarohana lalindalina kokoa io? Eny ary, izany no fotoana manomboka ny fialamboly - ary ao anatin'izany dia misy safidy maro karazana fitaovam-pijerena ny rindrankajy hafa. Ary eny, afaka manampy anao hanangana ny profesora idealy amin'ny rohy amin'ny tranonkala. Iza amin'ireo fitaovana fijerena ny fijerena indray ny navigateur dia tokony hifidy ny mpanampy anao ianao? Andao hikolokolo!
3 Fomba tranainy amin'ny "Ideal" Link Profile
Alohan'ny hanombohantsika, andeha hojerentsika fa manaraka ireto teknikam-pifandraisana an-tapitrisany ireto isika mba hahatonga ny rohy "ide" - Tsy misy fitaovana fijerena backlink na rafitra hafa manampy amin'ny fanombohana tsara. Izany no mahatonga ankoatra ny fanaovana izay tsara indrindra mba hialana amin'ny Black-Hat SEO toy ny areti-mandringana, dia asaina manaparitaka ny ezahanao amin'ireto manaraka ireto ianao:
Tsarovy fa ny votoaty dia ny mpanjaka, tranonkala fikarohana. Midika izany fa tokony hifanaraka hatrany amin'ny votoatiny izay manome lanja - voalohany sy ambony indrindra.
Mametraka lamosina vaovao tsy miaina afa tsy ny fanamarinana marina sy ny fanamarinana tsara.
Miala amin'ny varotra na fifanakalozana amin'ny backlinks amin'ny vidiny rehetra, ary tsy mihatra amin'ny PBN (tambajotra manokana blog).
Fantatrao ve izany rehetra izany?
Ny mety mahavariana ny tompon'ny tranonkala maro dia tsy hoe ny rohy rehetra dia mitovy amin'ny natiora. Azonao antoka ve fa manorina azy ireo ianao? Raha ny zava-drehetra, mety ho afaka ny hihaona amin'ireo zavatra andrasana tsara ao amin'ny SEO ny rohinao amin'ny rohy web misy ankehitriny. Andeha isika hanao ny fahasamihafàna - ny zavatra dia ny famerenana ny backlinks sasany dia mikendry tombontsoa lehibe sy azo ekena amin'ny seho SEO. Na dia tsy manana lanjany tena aza ny hafa, amin'ny fahitana ireo fitaovam-piadiana lehibe dia tsy misy dikany sy tsy misy. Ny tena zava-dehibe - eto isika dia miditra fifandimbiasana tena hafahafa - raha ny marina, ny rindran-damina dia mety ho sahirana ihany, indrindra raha tsy ampiasaina amin'ny fampiasana tsy fetezan-tsakafo.
Misy tsirony samihafa isan-tsofoka
Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny rohy samihafa dia natao ho tonga amin'ny tsiron-tsakafo samihafa - izany dia satria tsy isaky ny rohy famindrana (na voatendry handefasana) amin'ny alàlan'ny vavahadin-dalana mankany amin'ny SEO. Ny tiako hambara dia ny fanalahidin'ny fiverimberenana amin'ny fikarohana fikarohana dia PageRank (a. K. ny. TrustRank) dia ny rafitra metrika manan-danja tsara indrindra izay voatanisa hatramin'ny 0 hatramin'ny 10. Ny fampiasana io famaritana fototra io dia ankatoavina amin'ny ankapobeny mba hanova ny maha-zava-dehibe, ny fahamendrehana, ary ny fahefana rehetra ho an'ny pejy voalohan'ny tranonkala ho lasa tarehimarika mazava tsara.
Noho izany, avelao ny hanonona azy indray mandeha - alohan'ny zavatra hafa, ny rohy "ide" amin'ny rohy amin'ny tranonkala dia tsy mahazo afa-tsy amin'ny backlinks karazana tsara. Raha mikasika ny SEO dia midika izany fa tsy tokony hijanona amin'ny rohy mankany amin'ny Redirect ianao na tsy manaraka, na farafaharatsiny, aza misalotra mampiasa azy ireo raha tsy misy tanjona mety.
Rohy mankany amin'ny rohy
Rohy mankany amin'ny rohy dia manondro ny rohy manokan-tena mifandraika amin'ny loharano (matetika voasoratra ao amin'ny PHP) - hitondra anao any amin'ny tranonkala voatokana amin'ny alalan'ny pejy afovoany (ao amin'ilay tranonkala ), fa tsy mampifandray anao mivantana mankany amin'ny lasibatra amin'ny tifitra iray.
Rohy miaraka amin'i Nofollow
Ny rohy tsy misy mpanaraka dia tafiditra amin'ny sanda Nofollow HTML. Ity karazam-pifandraisana ity dia fitarainana lavitry ny hevitra fototra amina rindranasa natokana ho an'ny tanjona SEO amin'ny famaritana. Noho izany, raha tokony hifidy ny SEO, ny rohy miaraka amin'i Nofollow dia manondro mivantana ny URL an'ny tranonkala vondron'olona iray amin'ny hetsika iray - tsy manome alàlana na famindrana fidiram-bola na inona na inona. Mazava ho azy, ny rohy No-Follow dia natsangana noho ny antony maromaro - ohatra, manompo izy ireo hanohitra ny karazana sariohatra karazana (raha tsy izany, mba hisorohana ny spamdexing). Izy ireo koa dia zatra nandao ny varavarana misokatra ho an'ny traikefa niainan'ny olona fotsiny (i. f. , tsy mamela ranom-pifandraisana izy ireo). Noho izany, ny fampiasana ny rohy No-Follow dia mety ho fanapahan-kevitra tsara, e. h. , indrindra ho an'ireo webmasters sy tompon'ny tranokalam-pifandraisana mifandraika amin'ny pejy Spam noho ny antony maromaro.
Raha manana ny toerany isika, avelao hiverina amin'ny toeran'ny adihevitra misy antsika ankehitriny - izay ahafahan'ny mpanaraka mpijery rindrankajy afaka mamorona profil idealy amin'ny rohy web? Eny, miankina izany. Tsotra fotsiny fa efa nanandrana fitaovana samihafa maro samihafa aho tamin'ny taona lasa - miaraka amin'ny endriny rehetra tsy manam-paharoa, sy ny toerana marefo mahatsiravina. Raha ny amiko, dia hitako ireto safidy manaraka ireto ny tena mety: Mozart Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), Majestic SEO Toolkit, ary Ahrefs Backlink Viewer / Checker Tool. Mazava ho azy, fa ianao ihany no manapa-kevitra - fa manantitrantitra aho fa nanandramanao ny tsirairay tamin'izy ireo, farafaharatsiny. Mariho fa tonga amin'ny safidy noforomporonina noforomporiko aho, izay fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpijery an-dahatsary sy mamorona rindrambaiko ara-analyse - raha mandinika ny sandan'ny soso-kevitra azo ampiharina, ny traikefan'ny mpampiasa, ny safidy manan-danja indrindra, ary ny vokatra farany, tena marina.
Ho famaranana, te-hampahafantatra anao ny tena fototra amin'ny fanoratana ny mombamomba anao amin'ny rohin'ny tranonkala. Midika ve izany fa alohan'ny hijerena ireo horonan-tsarimihetsika vaovao miaraka amin'ny fitaovana fijerena indray backlink vao haingana, dia tsara kokoa ny manamboatra ny tsy mety efa misy anao. Manàna fanombohana madio - Mampiasà Google Disavow Tool mba hanaisotra ny zavatra rehetra izay mety hampalahelo ny paikady SEO amin'ny sehatra, na farafaharatsiny hampidina ny kalitaon'ny rakitra ho an'ny backlink amin'ny lafiny iray farafahakeliny. Raha fintinina, eny fa na dia mahatsapa zavatra mampiahiahy momba ny tranonkala iray manokana izay ianao mifandray - mitandrema mba hanafoanana ny fiantraikany ratsy rehetra. Ataovy izany, ampiasao ny fitaovana tsy mana-kery mba "hiteny" Google tsy hihevitra ireo rohy hafahafa izay tsy fantatrao hatramin'izao, farafaharatsiny. Amin'izany fomba izany, maro ny tranonkala matihanina mampiasa io fitaovana fototra io (fa tsy ireo fitaovana mpijery mpijery an-tariby malaza) - mba hiverenana sy hanafoanana, hanitsy na hanamboatra haingana ny fanao SEO rehetra izay efa nitazona azy ireo manokana fandinihana Source .